Kitra – Can 2023: tsy miatrika lalao savaranonando ny Barea | NewsMada
Kitra – Can 2023: tsy miatrika lalao savaranonando ny Barea
Navoakan’ny Kaonfedera­siona afrikanina (Caf), ireo tetiandro hanatontosana ny fifanintsanana ho an’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika, ho an’ny ekipam-pirenena (Can 2023), tanterahina any Côte d’Ivoire. Noho ny filaharan’ ny Barea ambony be, izay eo amin’ny faha-101 maneran-tany, tsy miatrika ny lalao savaranonando intsony i Madagasi­kara. Fihaonana lalao mandroso sy miverina, hotanterahina ny 21 – 29 marsa ho avy izao.
Avy hatrany dia miatrika ny lalaom-bondrona ny Barea de Madagascar. Misy andro enina izany ka ny andro efatra voalohany hotanterahina ny 1 ka hatramin’ny 14 jona ary ny andro faha-5 sy faha-6 kosa hatao ny 19 ka hatra­min’ny 27 septambra 2022. Hatao, aorian’ny fahavitan’ny lalao savaranonando ny antsapaka amin’izany, izay hisy vondrona 12. Marihina fa tafita hiatrika ny dingana famara­nana amin’ny Can 2023 hatao ny 23 jona ka hatramin’ny 23 jolay 2023 ireo roa voalohany isam-bondrona.
Hanomboka ny volana jona izao ihany koa ny fifanintsanana hiadian-toerana ho an’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika, ho an’ireo mpilalao tsy matihanina (Chan 2023). Hisy fihodinana telo izany izay hatao lalao mandroso sy miverina. Ny 24 – 26 jona ny fihaonana mandroso ho an’ny fihodinana voalohany ary ny 1 – 3 jolay ny miverina. Ny 22-24 jolay ny lalao mandroso ho an’ny fihodinana faharoa raha 29 – 31 jolay ny miverina ary ny 26-28 aogositra ny mandroso ho an’ny fi­hodinana fahatelo, raha 2-4 septambra ny miverina. Hia­trika ny dingana famaranana, hatao any Alzeria, ny 8 janoary ka hatramin’ny 5 febroary 2023 izay tafavoaka aorian’io dingana fahatelo io.